Ungayilinganisa Kanjani i-ROI Yemikhankaso Yakho Yokukhangisa Ngevidiyo | Martech Zone
Ukukhiqizwa kwamavidiyo kungenye yalezi zindlela zokumaketha ezivame ukukalwa ngaphansi uma kukhulunywa nge-ROI. Ividiyo ephoqelelayo inganikeza igunya nobuqotho obenza uphawu lomkhiqizo wakho buqhuqhe amathemba akho esinqumweni sokuthenga. Nazi ezinye izibalo ezinhle ezihambisana nevidiyo:
Amavidiyo ashumekwe kuwebhusayithi yakho angaholela ekukhuleni okungu-80% kwamazinga okuguqulwa
Ama-imeyili aqukethe ividiyo anezinga lokuchofoza eliphakeme ngama-96% uma kuqhathaniswa nama-imeyili angewona awevidiyo
Abakhangisi bevidiyo bathola ukuhola okungaphezulu kuka-66% minyaka yonke
Abathengisi bamavidiyo bajabulela ukwanda ngama-54% kokuqwashiswa komkhiqizo
Ama-83% alabo abasebenzisa ividiyo bakholelwa ukuthi bathola i-ROI enhle kuyo nge-82% bakholelwa ukuthi isu elibucayi lelo
Amabhizinisi amancane amancane naphakathi nendawo ayaqala ukugibela nge-55% ekhiqiza ividiyo ezinyangeni eziyi-12 ezedlule
Ukukhiqizwa okukodwa ithuthukise le infographic eningiliziwe, Ukulinganisa i-ROI kumikhankaso yokukhangisa ngevidiyo. Inemininingwane yamamethrikhi okufanele ngabe uwuqaphile ukuthuthukisa ukumaketha kwevidiyo yakho i-ROI, kufaka phakathi ukubalwa kokubuka, lwekucocisana, izinga lokuguqulwa, ukwabelana komphakathi, impendulo, Futhi inani lezindleko.
I-infographic nayo ikhuluma ngokusatshalaliswa kwevidiyo yakho ukukhulisa umthelela wayo. Ngiyathanda ukuthi babelana ngamasiginesha e-imeyili nawama-imeyili njengezindawo ezinhle zokuqhakambisa ividiyo yakho. Omunye umthombo wokusabalalisa othintwe kancane yi-Youtube nokwenza ngcono izinjini. Ungakhohlwa ukuthi kunezindlela ezimbili ezingathinta ukusesha lapho umaketha ngevidiyo:
Ukuseshwa Kwevidiyo - I-Youtube iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu futhi ungaqondisa ithrafikhi eningi emuva kumkhiqizo noma kumakhasi wakho wokuguqula. Kudinga ezinye nokwenza kahle okuthunyelwe kwakho kwevidiyo kwe-Youtube, noma kunjalo. Izinkampani eziningi kakhulu ziyaphuthelwa yilokhu!
Izinga Lokuqukethwe - Kuwebsite yakho, ukungeza ividiyo esihlokweni esenziwe kahle, esinemininingwane kungathuthukisa kakhulu amathuba akho wokukalwa, kwabelwane ngawo, futhi kubhekiswe kukho.
Nayi i-infographic ephelele ngolwazi oluthile oluhle!
Tags: izinga lokuguqulwaividiyo ye-imeyililwekucocisanaamamethrikhi wevidiyo abalulekileindlelalinganisa i-roiRIOizindleko zevidiyoukusabalalisa ividiyoi-imeyili yevidiyoimpendulo yevidiyoukukhangisa kwevidiyoumkhankaso wokumaketha ividiyoamamethrikhi evidiyoukuhlela ividiyoividiyo roiukwabelana ngamavidiyoisignesha yevidiyoizibalo zevidiyoukubalwa kokubukayoutube